> Resource > Lugood > Lugood Data Recovery: Xulo Ladnaansho iDevice ee Data ka Lugood
Ku saabsan Lugood Data Recovery software
Wondershare Lugood Data Recovery ahaa Mac Lugood gurmad shawladda, kaasi oo caawinaya in eegista ku eegaan ceshan xogta laga gurmad Lugood ee files. Hadda, waxaa la bedelay Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) . Ka sokow soo saarida gurmad Lugood, labada barnaamijyada kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Marka la barbar dhigo Wondershare Lugood Data Recovery (Mac), Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac) waa version sare waxaa ka mid ah.
Sidee version sare oo shuqullada Lugood Data Recovery
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka siinayaa laba nooc oo ah hab-kabashada, si toos ah u soo kabsado xogta laga qalabka macruufka (cusub oo ay taageerayaan iOS9) iyo kabsado xogta ka Lugood gurmad files. Waxaa u shaqeeya ku dhowaad dhammaan iPhone (oo ay ku jiraan iPhone6, iPhone 6 Plus), iPad iyo iPod taabto. Aan ka soo bixi version maxkamadda waxaa ka mid ah hoose oo ay leeyihiin wada isku day. The download version maxkamad waa lacag la'aan.
Qeybta 1: Lugood Data Recovery: Macdan gurmad Lugood ee file inuu ka soo kabsado xogta
Qeybta 2: kabashada xogta iDevice: iskaan iPhone, iPad ama iPod taabto inuu ka soo kabsado xogta ku yaal
Qeybta 1: Lugood Data Recovery: Macdan Lugood gurmad file inuu ka soo kabsado xogta
Next, aynu qaadan kabashada Lugood xogta Windows (Dr.Fone ee macruufka) sida tusaale. Bal aan hubiyo tallaabooyinka hadda.
Tallaabada 1. Warbixiinta Lugood gurmad
Ka dib markii socda barnaamijka on your computer, bedesho hab u soo kabashada kale, ka soo kabsado Lugood ee kaabta File. Markaas oo dhan Lugood gurmad files waxaa laga heli doonaa oo ku qoran idinka soo hor jeedda. Dooro mid aad rabto in aad soo saaro iyo riix Start Scan button.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta laga gurmad Lugood faylka
Si ka duwan soo celinta xogta ka gurmad Lugood, aad eegista ku eegaan karo oo ka soo kabsado xogta laga gurmad Lugood. Ka dib markii baaritaan, Xiisaha iyo sax waxyaabaha aad rabto in natiijada scan. Markaasuu iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.
Qeybta 2: kabashada xogta iDevice: iskaan taabashada iPhone / iPad / iPod inuu ka soo kabsado xogta ku yaal
Tallaabada 1. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan iDevice in kombiyuutarka
Ka soo kabashada xogta si toos ah uga iDevice, waa feature cusub ay bixiyaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Ma aad heli karto hawsha ee Lugood ee hore Data Recovery software. Marka aad u software iyo xiro qalabka aad kombiyuutarka, waxaad arki doonaa daaqadaha kala duwan sida ay model aad deivce.
Wixii iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4, barnaamijka aad ku tusi doonaa sida soo socota ka dib markii lagu ogaan karo qalab aad:
Wixii iPhone, iPad iyo iPod xiriiri kale, oo ay ku jiraan iPhone cusub ee 6 iyo iPhone 6 Plus macruufka socda 9, barnaamijka wuxuu noqon doonaa sida tan:
Tallaabada 2. Start aad ka baareyso iDevice
No arrinta oo qalab aad u isticmaali, kaliya socda sharaxa on suuqa kala inuu sameeyo tallaabada xigta. Wixii iPhone 3GS / 4, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4, nuqul ka hage soo socda oo aad hesho qalab aad la marsiiyey.
1. Ku qabo iDevice iyo riix Start badhanka si ay u bilaabaan shaqada.
2. Markaas riix Home iyo Power badhamada qabanaya qalab aad u dhab ahaan 10 ilbidhiqsi.
3. Marka 10 seconds maray, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home muddo 10 ilbiriqsi oo kale.
Kale ee isticmaala qalab macruufka ah, waxaad bilaabi kartaa dhowr qalab aad adigoo gujinaya ku Start Scan button ku cad suuqa kala hoose.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta ku saabsan iDevice
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar. Ka dib markii in, barnaamijka aad soo bandhigi doonaan natiijada scan ah sida soo socota, halkaas oo ay dhammaan xogta laga helay qalab aad waxaa lagu soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid, iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad your computer.
Just download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo lacag la'aan ah.